Marazhiya - ALinks
Ungawana sei mabasa muMalaysia?
November 27, 2020 Antika Kumari mabasa, Marazhiya
Icho chiitiko chinotyisa kutsvaga basa muMalaysia. MuMalaysia, musika unokwikwidza zvakanyanya uye ungangosangana nematambudziko akati wandei, kusanganisira vanobudirira nyanzvi. Izvo zvataurwa, iwe unogona kuona kuti zviripo kushandira. Kuenzaniswa
October 12, 2020 Antika Kumari Marazhiya, vhiza
Chirongwa cheEVisa chakaitwa neHurumende yeMalaysia muna2017 kusimudzira kunyorera vhiza nekushanya kuMalaysia. Vagari vemuIndia vanogona kunyorera zvese zvemagetsi vhiza (eVisa) uye eNTRI (Yemagetsi Kufamba Kunyoresa uye Ruzivo) kana vakateerera
Malaysia visa zvinodiwa
September 28, 2020 Maitri Jha Marazhiya, vhiza
Hurumende yeMalaysia yakaunza chirongwa che e-Visa chevafambi kupinda muMalaysia. Vafambi vanozadza online application inovagonesa kunyorera vhiza yekupinda muMalaysia. Mavisa kuburikidza neemail anosvika kune vanonyorera mushure mekuzadza iyo
Mutengo Wekurarama MuMalaysia
Dai 15, 2020 Maitri Jha Marazhiya, famba
Malaysia inyika yakanaka kwazvo yekugara, senyika yakavandudzika munguva dzichangopfuura. Malaysia inzvimbo inozivikanwa kwazvo uye inozivikanwa yekuenda kunzvimbo yekushanya kwemahombekombe. Chikafu chiripo apa ndozvimwe zvakanakawo kuva nazvo.
Mutengo Wekurarama Kana Kukwereta Uye Dzimba MuDenmark
Dai 14, 2020 Maitri Jha Marazhiya, famba
Kutungamira kugara muDenmark, ipapo iwe unofanirwa kuziva zvimwe zvinhu zvakakosha pamusoro penyika. Mari yekugara muDenmark inodhura zvakanyanya. Kunyangwe mwero wekugara wakakwira kwazvo kupfuura mune zhinji dzekumaodzanyemba kweEurope
Iwe uri mukati yekufamba-famba here? Kufambisa MuMalawi.
Dai 12, 2020 Karuna Chandna tenderera, Marazhiya
Yakachipa pashiri nzira dzekutakura muMalaysia. Zvekufambisa zvivakwa ndechimwe chezvinhu zvakakosha kuti nyika ifambire mberi. Kunyangwe India iine hukuru uye hwakasiyana chikamu chekutakura chiine chikamu chayo chematambudziko, inogona kukundwa nesimba-rinoshanda
Dziviriro Dziviriro MuMalaysia
Dai 11, 2020 Maitri Jha Marazhiya, vapoteri
Malaysia inzvimbo yekutizira, sevanhu vanoverengeka vanoenda ikoko gore rega. Iwe unoda kunyorera dziviriro yehupoteri kuMalaysia? Isu takanamatira mamwe masosi eruzivo kwauri ayo anogona kukubatsira iwe. Mukana we
Hutano hwehutano Uye Zvipatara MuMalaysia.
Dai 6, 2020 Karuna Chandna utano, Marazhiya, famba
Vanhu vanotarisanawo nenyaya yekusarudzira vanachiremba vakanyanya kune imwe nyika. Uye zvakare nemasangano akasiyana siyana pese paisvika pakubhadhara mari dzekurapa. Izvi zvinodaro nekuti vekuchipatara MuMalawi vanozivikanwa nehunyanzvi. Zvipatara MuMalawi zvaka
Dzidza kuyunivhesiti yeMalaysia
April 3, 2020 Antika Kumari Marazhiya, kudzidza
Sarudza kudzidza kuyunivhesiti yeMalaysia uye iwe unowana mukana wekuwana masango ayo anonaya, mahombekombe, nezvimwe… Mumaguta zvakare, mune zvakawanda zvekuchengetedza pfungwa dzese dzakabatikana, kubva kumisika ine mavara kusvika kumamoski. Buddhist neHindu